Ambahoaka-Soanierana Ivongo: Niafara tamin'ny fifandonana ny fikasana hametraka Ben'ny tanàna HVM, telo naratra mafy
mardi, 11 juillet 2017 20:46
Telo no naratra, ka mpahay haiady iray mpiara-dia tamin'i Régis, ilay kandida HVM saika hapetraka ho Ben'ny tanàna omaly taty Ambahoaka, ny iray amin'ireo naratra ary voa mafy tokoa.
Laharana faharoa taorian'i Mananjara Fidson dit Rasomotra i Régis tamin'ny fifidianana Ben'ny tanàna tamin'ny 31 jolay 2015. 10% ny elanelam-baton'ny roa tonta. Efatra ireo kandida nifaninana tamin'io.
Efa napetraka ofisialy ho Ben'ny tanàna i Rasomotra, ary niasa nanomboka teo. Nivadika anefa ny rasa taorian'ny fifidianana Senatera ny desambra 2015, fa dia Régis indray no nambaran'ny Fitsarana tao Toamasina fa nandresy rehefa nofoanana ny voka-pifidianana tamin'ny birao fandatsaham-bato miisa 5 tamin'ireo 19 nisy tao Ambahoaka.
Nitondra ny raharaha eny amin'ny Filankevi-panjakana (Conseil d'État) i Rasomotra. Mbola eny ny raharaha amin'izao. Eo ampiandrasana ny didy no misy hatrany ny fikasana hametraka amin'ny toerany ny Ben'ny tanàna HVM nolaniana ara-pitsarana, ka anisan'izany ity omaly alatsinainy 10 jolay 2017 io.
Nitarika ny solontenam-panjakana saika hanatanteraka izany ny Prefen'i Fenoarivo Atsinanana. Nanohitra io fikasana hametraka Ben'ny tanàna HVM io ny vahoaka. Nisy ny fifandonana. Olona telo naratra, ka ny iray tena voa mafy ary atahorana ny ainy. Mpiaradia amin'ilay Ben'ny tanàna HVM saika hapetraka avokoa izy ireo.
Milamin-dratsy aty Ambahoaka androany.